गुगल एनालिटिक्स र एनडीशमा भाषा स्पाम कसरी व्यवस्थापन गर्ने? सेल्टल्टबाट अभ्यास गर्नुहोस्
इन्टरनेट विशेषज्ञहरूले तर्क गर्छन् कि गुगल एनालिटिक्स प्रयोगकर्ताहरूका लागि खोजशब्द र रेफरल स्प्याम घुसाउनुहोस् अब अतीतको कुरा हो। Google एनालिटिक्स URL हरू र स्प्याम सन्देशहरू ह्याङ्गर्स वा धोखाधड़ीहरूले अनियमित वेबसाइटहरू र GA (Google एनालिटिक्स) ट्र्याक कोडहरूमा अनियमित गल्ती डेटा पठाउँछन् जब कानूनी रूपमा।
प्रमुख विशेषज्ञ सेल्टल्ट , आर्टम अङ्ग्रेजीको अनुसार यो चुनौती सजिलै फिल्टरको प्रयोग गरेर समाधान गर्न सकिन्छ। तथापि, जानकारी छोडने को द्वारा स्वयं समस्याग्रस्त छ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको लागि खराब खबर, साइट मालिक र प्रोग्रामरहरू अब ह्याकर्सले अब जैविक कीवर्ड र रेफरल स्प्यामबाट विच्छेद गरेका छन्। स्प्यानरहरूले अब अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूलाई भाषा रिपोर्टको साथ मारिरहेका छन्। एसईओ गोल्डटेबलले यो तीन हप्ता अघि एक रिपोर्ट लेखे।
Google Analytics सन्दर्भमा, नक्कल ट्राफिकलाई प्रयोगकर्ताको गुगल एनालिटिकल सम्पत्तिमा पठाएको नकली हिटको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। एक "हिट" साइटको साथ प्रयोगकर्ता अन्तरक्रियामा उल्लेख गर्दछ जुन Google Analytics सम्पत्तिमा जानकारी पठाउने परिणाम हो। उदाहरणको लागि, यो "संक्रमण," "स्क्रिनदृश्य," "कार्यक्रम," वा "पृष्ठदृश्य" हुन सक्छ।
एक बट द्वारा एक नकली हिट उत्पन्न भएको छ वा मानव द्वारा अन्तरक्रियाको सट्टा एक कार्यक्रम। वर्तमानमा, कुनै Google Analytics हिट नकल गर्न सम्भव छ। यसको अर्थ स्प्यामरहरूले नकली प्रत्यक्ष ट्राफिक, नकली कार्बनिक ट्राफिक, नकली कार्बनिक ट्राफिक, र सोशल मिडियाबाट व्युत्पन्नबाट नकली डेटा पठाउन सक्दछ। ह्याकरहरू भर्चुअल पृष्ठदृश्यहरू, घटनाहरू, होस्टनाम, अनुरोध URL, लेनदेन वस्तु, र कुञ्जीहरू नकल गर्न सक्छन्। यसबाहेक, हैकरहरूले Google Analytics ID लाई तिनीहरूको गहिरो जादू प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। व्यावहारिक रूपमा, तिनीहरू विश्वभर कुनै पनि स्थानबाट र Google Analytics खाता पहुँच बिना एनालिटिक्स जानकारी पुन: लेखन गर्न सक्छन्।
होस्टनाम फिल्टर सेट अप गरेर गुगल एनालिटिक्स मा स्प्याम भाषा को छुटकारा प्राप्त गर्नुहोस
प्रयोगकर्ताहरू जसको Google Analytics भूत र रेफरल स्प्याम अनुभव गर्दै लेखको लागि विशेष गरी उपयोगी छ। यसकारण, यस खण्डले छलफल गर्नेछ कि कसरी Google Analytics रिपोर्टहरूमा नकली ट्राफिकको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न वा मेटाउने।
धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो Google एनालिटिक्समा यस्तो प्रकारको स्प्याम प्राप्त गरेका छन्। त्यसकारण, कसरी अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूले यी स्प्यामहरू हटाउन सक्छन्? यस जडानमा, सेक्शनले बताउँछ कि प्रायजसो स्प्याम फिल्टर गर्नको लागि होस्टनाम फिल्टर कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। तलका चरणहरू पछ्याउनुहोस्:
1। गुगल एनालिटिक्स (2 9)
को प्रशासनिक पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस्।
गुगल एनालिटिक्स पृष्ठमा, दायाँ स्तम्भमा बटन क्लिक गर्नुहोस् र "फिल्टर" चयन गर्नुहोस्।
2। नीलोमा क्लिक गर्नुहोस् "फिल्टर थप्नुहोस्" बटन (2 9)
Google Analytics सर्वोत्तम अभ्यास अनुसार यो दृश्यको लागी एक नयाँ फिल्टर सेट अप गर्नु पर्छ। यसले एकल अनुचित वेबसाईटको ट्राफिकलाई बनाउँछ।
3। होस्टनाम फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस् (2 9)
गुगल एनालिटिक्स पृष्ठमा, माथिल्लो बायाँमा "नयाँ फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस् र प्रदान गरिएको क्षेत्रमा फिल्टरको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्। "फिल्टर प्रकार" अन्तर्गत "पूर्वनिर्धारित" चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि चार ड्रप-डाउन मेनुमा चयन गर्नुहोस् 'मात्र'> 'ट्राफिक होस्टनाम'> जुन समान छ, 'त्यसपछि वेबसाइटको यूआरएल प्रविष्ट गर्नुहोस्। अन्तमा, पछि नेभिगेट गर्नुहोस् र कानूनी वेबसाइटको ट्राफिकको लागि रिपोर्ट होस्ट नामहरू जाँच गर्नुहोस्। साइटमा वास्तविक ट्राफिकसँग सम्बन्धित सबै होस्टनामहरू समावेश गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।
4। साइटको फिल्टर बचत गर्नुहोस् (2 9)
सरल फिल्टरले बल्क रेफरल स्प्यामको ख्याल राख्नुपर्दछ जुन साइटमा लुकेको हुन्छ।
. Source - best mobile app developers